फ्राइडे रिलिज : निखिल र सौगातको ‘संरक्षण’ प्रदर्शनमा
काठमाडौँ । आज फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत नेपाली सिनेमा घरहरुमा नेपाली चलचित्र ‘संरक्षण’ प्रदर्शन हुदै छ ।
एक्सन स्टार निखिल उप्रेती र सौगात मल्ल मूख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र ‘संरक्षण’ नेपाली राजनीतिक परिवेशमा आधारित चलचित्र हो । चलचित्रमा राजनीतिमा लागेकाहरुले गर्ने शक्तिको दुरुपयोगबारे देखाइएको छ ।
पछिल्लो समय फरक धारका चलचित्रमा काम गर्दै आएका सौगात मल्ल र एक्सन स्टारका रुपमा चिनिने निखिल उप्रेतीको यो चलचित्रलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।
पूर्णेन्द्रकुमार झाले निर्देशन गरेको फिल्ममा निखिल उप्रेती, सौगात मल्लका अलावा कामेश्वर चौरासिया, मलिना जोशी, प्रमोद अग्रहरी, अशिष्मा नकर्मीको मुख्य भूमिका रहेको छ । फिल्मलाई प्रदिपकुमार उदय र नरेन्द्र महर्जनले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।
फिल्ममा परवेश मल्लिकको संगीत, पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन, हिमाल केसीको एक्सन छ ।
चितवन प्रिमियरमा राम्रो प्रतिक्रिया :
फिल्म ‘संरक्षण’को चितवनमा रेड कार्पेट प्रिमियर भएको छ । बुधवार चितवनमा रहेको जल्मा हलमा गरिएको प्रिमियरमा नायिका द्धय मलिना जोशी र नकर्मी, निर्माता द्धय प्रदीप कुमार उदय, नरेन्द्र महर्जन, निर्देशक पूर्णेन्दु झा, कलाकारहरु नन्दु श्री वास्तव, प्रमोद अग्रहरी, राज कटुवाल, सुशान्त श्रेष्ठ लगायत उपस्थित थिए ।
लक्की मिडिया हाउस चितवनले आयोजना गरेको प्रिमियरमा ‘संरक्षण’ले दर्शकहरुबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाएको छ ।
मन्दिरमा पूजासँगै मुसाको संरक्षण
ललितपुर / घरमा मुसाले दुःख दिएर हैरान हुनुहुन्छ ? कति पटक त कपडा नै च्यातिदिएर लाउन नमिल्ने भएको होला । धेरैले मुसा भगाउनका लागि अनेक उपाय पनि गरिरहेको हुनसक्छ । धेरैले
जनप्रतिनिधि फलोअप : काठमाण्डौँ महानगर वडा नम्बर ८ को चुनौती धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास
काठमाण्डौँ । काठमाण्डौँ महानगरको ३२ वडा मध्यमा मझौला वडाको रुपमा वडा नम्बर ८ पर्छ । जय बागेश्वरी, बनकाली, पिङ्गलास्थान, ताम्रेश्वर, तीलगंगा, भुबनेश्वरी, गौरीघाट, गुहेश्वरी, पञ्चकन्याटोल, डठुटोल लगायतका ठाउँहरु काठमाण्डौँ महानगरकापालिका
लोकसंस्कृति संरक्षणको लागि महिलाले बजाउँछन् नौमती बाजा !
म्याग्दी । शुभ कार्यमा परम्परागत रुपमा पुरुषले मात्रै बजाउने गरेको नौमती बाजा अब महिलाले पनि बजाउन थालेका छन् । पञ्चेबाजा बजाउने चलन हराउँदै जान थालेको समयमा पोखरामा बसोबास गर्ने म्याग्देलीले भने महिला र
विभिन्न धार्मिक सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ – पूर्वसभामुख नेम्वाङ
काठमाडौँ । नेकपा एमाले का नेता सुवास नेम्वाङले इलाममा रहेका पर्यटकीय स्थललाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । इलाम समाज नेपाल हङकङ ले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले त्यहाँको